Tag: manao doka | Martech Zone
Tag: manao doka
Wednesday, May 4, 2016 Alakamisy, May 5, 2016 Douglas Karr
Nandritra ny fikarohana ny lohahevitry ny dokam-barotra dia sendra sary iray aho momba ny fomba anambaran'ny dokambarotra antsika. Ny infographic etsy ambany dia manokatra amin'ny fiheverana fa manankarena ny orinasa ary manana vola be dia be ary ampiasainy hamitahana ny mpihaino mahantra azy ireo. Heveriko fa fiheverana somary manelingelina, mampalahelo ary tsy azo inoana izany. Ny fiheverana voalohany fa ny orinasa manankarena ihany no manao doka dia hevitra hafahafa. Ny orinasanay dia tsy manankarena ary, raha ny marina, nanana mpivady